- Tsara ny manindry fa raha ny sitrapon'Andriamanitra no jerena dia toerana anisan'ny ampiasain'ny satana fatratra ny « boite de nuit » satria ao no iandohan'ny faharatsiana rehetra toy ny fijejojejoana, fitsiriritana, fimamoana, fijangajangana sy ny filalaovan-dratsy rehetra (Gal 5:19).
- Amin'ny maha-fitaka azy dia toa ohatran'ny seho tsara ivelany no isintonana ny olona hiditra ao, ary satria malemy ny nofo dia mora mitolefika izy manoloana ny fakam-panahy maro mitranga ao.
- Anisan'ny antony mahapotika fiainan'ny olona maro ny fandehanana amin'ireny « boite de nuit » ireny satria sady misy fiaitraikany ratsy amin'ny fahasalamana toy ny tsy fahampian’ny torimaso, marary vavony noho ny fifohana sy fisotroana toaka ary koa ny ara-bola satria dia tsy itsitsiana tokoa ny fandaniana rehefa ao.
- Tokony ho sarotiny ny ray aman-dreny manana zanaka tanora mba hanoro azy ireo ny lala-marina hananan'izy ireo ho avy vanona.
- Tsy misy lala-marina afa-tsy ao amin'i Jesosy Kristy irery ihany, mbola hafa ery izany tanora hita mandany andro manompo sy midera an'Andriamanitra izany noho ny mandany andro any amin'ny « boite de nuit » izay sady mandrava no manapotika ny ho avy tanteraka...tsy mbola nisy olona nahita soa maharitra izany tamin'ny fandehanana « boite de nuit”.
- Hoy ny voasoratra ao amin’ny Gal 6: 8 fa izay mamafy ho an'ny nofo dia hijinja fahasimbana avy amin'ny nofo ary izay mamafy ho an'ny fanahy dia hijinja fiainana mandrakizay avy amin'ny Fanahy.
Isaorana Ndrantomahenina, Mpitandrina nanolotra ny toro-hevitra